पृथ्वीबाट अल्बेडो यो के हो र यसले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी असर गर्दछ नेटवर्क मौसम विज्ञान
विश्वव्यापी स्तरमा तापक्रमको नियमनलाई असर गर्ने एक कारक हो पृथ्वीको अल्बेडो। यो अल्बेडो प्रभावको रूपमा परिचित छ र यो एक प्यारामिटर हो कि तापक्रमलाई ठूलो मात्रामा प्रभाव पार्छ र, त्यसैले, लाई असर गर्दैछ जलवायु परिवर्तन। तपाईं अल्बेडो को प्रभावहरु धेरै राम्ररी थाहा पाउनु पर्दछ निष्कर्ष निकाल्न र योजनाहरु विकास गर्न को लागी अल्बेडो को प्रभावहरु लाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ। ग्लोबल वार्मिंग.
यस लेखमा हामी पृथ्वीको अल्बेडो के हो र कसरी यसलाई उतार-चढाव हुन्छ र विश्वव्यापी तापक्रमलाई परिवर्तन गर्दछ भनेर वर्णन गर्न जानेछौं। यस घटनाले कसरी मौसम परिवर्तनलाई असर गर्छ?
1 पृथ्वीको अल्बेडो भनेको के हो?
2 अल्बेडो र मौसम परिवर्तन
3 जंगल भूत मानीन्छ
4 समस्याको समाधान
पृथ्वीको अल्बेडो भनेको के हो?
हामीले उल्लेख गरेका छौं कि यो प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रमलाई निश्चित तरिकामा प्रभाव पार्छ। अल्बेडो यस्तो प्रभाव हो जुन सूर्यको किरणहरूले सतहमा प्रहार गर्दा हुन्छ र ती किरणहरू बाह्य स्थानमा फर्कन्छन्। हामीलाई थाहा छ, सबै होइन सौर्य विकिरण यसले हाम्रो ग्रहमा रहन्छ वा पृथ्वीबाट ग्रहण गर्दछ लाई असर गर्दछ। यस सौर्य विकिरणको एक भाग बादलको उपस्थितिबाट वातावरणमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, अर्कोद्वारा वातावरणमा कायम रहन्छ हरितगृह ग्याँस र बाँकी सतहमा आउँछन्।
ठिक छ, सूर्य को किरणहरु को सतह को रंग मा निर्भर गर्दछ, एक ठूलो रकम प्रतिबिम्बित हुनेछ वा अधिक मात्रा शोषण हुनेछ। गाढा र colors्गका लागि, सौर्य किरणहरूको शोषण दर बढी छ। कालो र the्ग हो जुन तातो को अधिक मात्रा शोषण गर्न सक्षम छ। यसको विपरित, फिक्का र colorsहरू सौर्य विकिरणको अधिक मात्रा प्रतिबिम्बित गर्न सक्षम छन्। यस अवस्थामा, लक्षित एक उच्चतम शोषण दरको साथ एक हो। यही कारणले गाउँहरूमा पहिले सेता घरहरू मात्र देखिन्थ्यो। यो गर्मी को उच्च तापक्रमबाट कम गर्मी शोषणको कारण घर इन्सुलेट गर्ने एक तरिका हो।
ग्रहको सबै सतहहरूको सेटको लागि र सौर किरणहरूको शोषण र परावर्तन दरहरूले पृथ्वीको अल्बेडो बनाउँछ। प्रमुख र color वा हाम्रो ग्रहमा अवस्थित सतह को विभिन्न प्रकार मा निर्भर गर्दै, हामी अधिक वा कम घटना सौर विकिरण शोषण हुनेछ। यस तथ्यले मौसम परिवर्तनमा ठूलो प्रभाव पार्छ जस्तो कि हामी यस लेखमा हेर्नेछौं।
अल्बेडो र मौसम परिवर्तन
निश्चय नै तपाईंले सोचिरहनु भएको छ कि यस प्रभावले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंगसँग के गर्दछ। ठिक छ, पृथ्वीको अल्बेडोले ग्रीनहाउस ग्यास र वातावरणमा उनीहरूको एकाग्रतामा वृद्धि बाहेक ठूलो प्रभाव पार्छ। पृथ्वीको ध्रुवहरु को एक धेरै स्पष्ट अल्बेदो प्रभाव छ, किनकि ध्रुव क्यापहरूको उपस्थितिको कारण सतह पूर्णतया सेतो छ। यसको मतलव खम्बाको सतहमा खडा हुने सौर्य विकिरणको ठूलो हिस्सा, पछाडि प्रतिबिम्बित हुन्छ र तातोको रूपमा भण्डारण हुँदैन।
अर्कोतर्फ, गाढा टोनको साथ सतहहरू जस्तै समुद्रहरू, महासागरहरू र जsts्गलहरू पनि हामी उच्च शोषण दर पाउँछौं। यो किनभने समुद्रहरू ट्रेटपहरू जस्तै गाढा रंगमा छन्। सौर्य विकिरणको कम मात्रा प्रतिबिम्बित हुने क्रममा यसको शोषण दर बढी छ।
पृथ्वीको अल्बेडो र जलवायु परिवर्तनको बिचको सम्बन्ध भनेको ध्रुवीय बरफ टोपीको नजिकै पग्लने क्रममा बाहिरी अन्तरिक्षमा फर्केका सौर्य किरणहरूको मात्रा घट्दैछ। पग्लेको भागले यसको रंगलाई उज्यालोदेखि अँध्यारोमा परिवर्तन गरिरहेको छ, त्यसैले अधिक ताप तापीनेछ र पृथ्वीको तापक्रम अझ बढ्नेछ। यो सेतो जस्तो छ जुन यसको पुच्छर काट्छ।
हामी ग्रीन हाउस ग्यासमा बृद्धि भएकोले विश्वको तापक्रम बढाइरहेका छौं जसले वायुमण्डलमा ताप कायम राख्छन् र यसैले ध्रुवीय क्याप्सहरू पग्लिरहेका छन् जसले सूर्यको किरणको प्रतिबिम्बलाई धन्यवाद दिन्छ। त्यो यसको सतह मा निहित।
जंगल भूत मानीन्छ
जसरी मानिसहरू जहिले पनि चरम सीमामा जान्छन्, जंगलीमा सौर्य किरणहरू शोषणको उच्च दर भएको सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो टाउकोमा हात राख्छन्। यो केवल यो संग हुन्छ, तर ती सबै जान्दछन् जुन उनीहरूलाई थाहा छैन। सबै थोक एक चरम हुँदैन र सबै कुरा अर्को हुँदैन। हेरौं, यो सत्य हो कि ज्गलले बढी सौर्य विकिरणहरू ग्रहण गर्न सक्षम छ, त्यसैले तापमान बढ्नेछ। थप, ध्रुवीय बरफ टोपीहरू पग्लने क्रममा यसलाई समुद्री सतहले बदल्नेछ, यो अँध्यारो हुनुको कारणले यसको शोषण बढाउँदैछ।
ठिकै हो, यदि यो मामला हो भने पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन कि जsts्गलमा लाखौं प्रजातिका बोटबिरुवाहरू छन् प्रकाश संश्लेषण र यसले हाम्रो वातावरणलाई शुद्ध पार्दछहामीले वातावरणमा छोडेका हरितगृह ग्यासहरूको स reducing्क्रमण घटाउँदै। मानिसहरुले यी जंगलहरुलाई असुरक्षित गर्न को लागी असम्भव छ केवल गलत जानकारी प्रस्तुत गरेर कि तिनीहरूले उपचार गर्न सकेका छैनन् वा तिनीहरूले सहीसँग बुझेका छैनन्।
थप रूपमा, त्यहाँ असंख्य अध्ययनहरू छन् जुन पुष्टि हुन्छन् वर्षाको उपस्थितिमा ठूलो वनको प्रभाव। अधिक वन जनसंख्या, वर्षा को मात्रा को अधिक, जो जलवायु परिवर्तनको कारण वैश्विक खडेरी को लागी आधारभूत छ। यद्यपि यो उल्लेख गर्न मूर्खतापूर्ण छ, सबै सावधानीहरू थोरै छन्, तर रूखहरूले हामीलाई सास फेर्ने अक्सिजन पनि प्रदान गर्दछ जुन हामी बाँच्न सक्दैनौं।
तपाईंले रूखहरूलाई असुरक्षित पार्नु पर्दैन वा चीजहरूलाई अत्यन्तै लिन सक्नुहुन्न। महत्त्वपूर्ण कुरा नवीकरणीय उर्जा प्रयोग गरेर वायुमण्डलमा ग्रीन हाउस ग्यासहरूको एकाग्रता कम गर्नु हो र आर्थिक प्रणाली परिवर्तन गर्न खपत बानी परिमार्जन। यसको परिणामस्वरूप वातावरणमा कम ताप-गैसिंग ग्याँसहरू हुनेछन्, र यसरी पृथ्वीको ध्रुव पग्लिदैन। यदि ती पोलहरू पग्लिएन भने, तापक्रम शोषण गर्ने सतह क्षेत्र बढ्दैन, न समुन्द्र सतह बढ्नेछ।
यदि हामीले बगैंचामा लगायौं र ज of्गलको सीमा बढायौं भने हामी वातावरणमा हरितगृह ग्यासहरूको घनत्वलाई पनि कम गर्नेछौं।
आशा छ कि जलवायु परिवर्तनले प्रगति गर्न जारी राख्दैन र यस कारणका लागि मानिसहरूले ज demon्गललाई असुरक्षित पार्न जारी राख्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » पृथ्वीको अल्बेडो
लुइस एसी भन्यो
अर्को धेरै राम्रा जानकारीमूलक लेख, यी NECESSARY अवधारणाहरूमा धेरै नै सिकाउँछ ... बधाई GERMAN P.
लुइस एसीलाई जवाफ दिनुहोस्